काठमाडौं / राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महामन्त्रीमा महिलातर्फ कुन्तीकुमारी शाही विजयी भएकी छन् । नायिकासमेत रहेकी रेखा थापा महामन्त्रीमा पराजित भइन् । आज घोषित मत परिणाम अनुसार कुन्तीले २००८ मत ल्याउँदै विजयी भएकी हुन् । रेखाले १६४० भोट ल्याएकी छन् । अन्य समाचार – पशुपतिनाथको कवच, मुकुट, नागमणि, एकमुखे रुद्राक्ष प्रदर्शन- पशुपतिनाथको भण्डारमा रहेको भगवान्को कवच, मुकुट, नागमणि, एकमुखे रुद्राक्ष, शङ्खलगायत पुरातात्विक महत्वका...
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) नयाँ नयाँ साथिभाईहरु सँग भेटघाट गरि दिनलाई रङगिन बनाउन सकिनेछ भने माया प्रेम तथा पति पत्निबिचको सम्बन्धमा बिश्वासको बाताबरण मजभुत भएर जानेछ । पारिवारिक माहोलमा दिन बित्ने तथा मिष्टान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर जुर्नेछ । मंगलबार तथा बुधबारको समय मध्ययम रहेकोले समयमा काम नबन्ने तथा ऋण लाग्ने हुनालेमानसिक तनाब बढ्नेछ । हतियार,फलाम तथा आगो सँग सम्बन्धित काम गर्दा...
उपत्यका विस्तारका ९ सडक निर्माण चैत भित्र सम्पन्न गरिने, कुन सडकको कति बाँकी छ काम ?
इच्छाराज तामाङसहित ४२ जनावि’रु’द्ध ठगी मु’द्धा दायर
झापामा होमवर्कको निहुँमा शिक्षकले कु’टे विद्यार्थी
नेपाली वि’द्यु’तीय मोटरसाइकल चढेर अर्थमन्त्री कुदे सरर…कति पर्छ मू’ल्य?
नेपालमै बनेको वि'द्यु'तीय मोटरसाइकलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कुदाएका छन्। मगलबार मन्त्रालय परिसर मा अर्थमन्त्री,अर्थसचिवले यात्री मोटरसाइकल टेष्ट डाइभ गरेका हुन्। कालिका क'न्स्ट्रक्स''नका विक्रम पाण्डेका...
विद्युत महशुल घट्यो : न्यूनतम मासिक शुल्क ३० रुपैयाँ
काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले विद्युत महशुल दर घटाएको छ । आगामी मंसिरदेखि लागू हुनेगरी आयोगले नयाँ महशुल दर कायम गरेको हो । बुधबार...
पहिले भन्दा सजिलै पास हुने नयाँ लाइसेन्स प्रणालीमा के-के छन् व्यवस्था?
बाढीले जनकपुर डुबेपछि संस्थानका प्रमुखलाई सिके राउतका कार्यकर्ताले अर्धन’ग्न बनाएर बजार घुमाए
कमल थापालाई ठूलो झ’ट्का, पाण्डेको समर्थन राजेन्द्र लिङदेनलाई
ओलीले अध्यक्ष नजिते, सम्म खाना समेत, नखाई बसिन् ९१ बर्षिया भद्रकुमारी, जिते पछि, खुशिमा ,यस्तो सम्म गरिन्” (भिडियो हेर्नुस)
आफू पराजित भएपछी यति सम्म भन्न भ्याए ओलिलाइ भिम रावलले
काठमाडौँ, १७ मङ्सिर। अ'भिनेत्री करिश्मा मानन्धरले कक्षा १२ पा' स गरेकी छिन् । मानन्धरले २.४१ जिपिए ल्याएर १२ कक्षा पा'स गरेकी हुन् । राष्ट्रिय परीक्षा...
हार्दिक बधाई / बुबाआमाले खेती किसानी गरेर पढाएकी छोरी मनिषा बीबीएसमा नेपाल टप भईन !
नेपाल टेलिकममा खुल्यो २७० जनालाई जागिर (सूचनासहित)
मुस्ताङमा भी,षण हिमपहिरो, विद्यालयका विद्यार्थीको भागाभाग, ६ जना घा,ईते (भिडियो हेर्नुस्)
अ,नपढ आमाकाे पिं’डा
‘से’क्स’ वाला स्कुटरका कारण कलेजकी छात्रालाई घरबाहिर निस्किनै मु’स्कि’ल
से’क्स’ले भा’इ’र’स म’र्छ भन्दै युवतीलाई से’क्स’को द’बा’ब दिएका डा’क्टर अ’र्ध’न’ग्न अवस्थामा प’क्रा’उ
पो’स्ट’मा’र्टम गर्न लागेका व्यक्तिले हातखुट्टा चलाउन थालेपछि…
डि’भो’र्स भएका महिलाहरूको पनि धेरै इ’च्छा चा’हा’ना हुन्छ: अभिनेत्री दत्त
लारा दत्ता चाँडै ‘हिकअप्स एण्ड हुकअप्स’ नामक वेब सिरिजमा देखिने भएकी छिन् । क्याजुअल से क्स जस्ता बोल्ड विषयमा बनेको यो वेब सिरिजमा लारा...
चिया पिएलगत्तै भूलेर पनि सेवन नगर्नुहोस् यी चिज, नत्र आउन सक्छ स”मस्या !
काठमाडौँ । सामान्यतया हामी धरै जसको दिनको स'रुवात चीया बाट हुन्छ । हामी सबैले बिहान र बेलुका चिया हामीले खा'ने गछौ। हामीकतिमा चीयाको ल'त हुने...
यी ५ लक्षणलाई नगर्नुहोस् वेवास्ता, हुनसक्छ हृ”दयघातको सं”केत
काठमाडौँ । हृ''दयघात पछिल्लो समय धेरै जनाको स'मस्याको विषय बनेको छ। हृ'दयमा कुनैपनि स''मस्या भएर काम गर्न न'सक्दा कति मानिसले यसकै का'रण ज्या'न समेत...
क्या’न्स’र के हो ? क्या’न्स’र लागेको कसरी थाहा पाउने ?
काठमाडौँ । क्यान्सरलाई धेरैले डरलाग्दो रोगको रुपमा लिन्छन्। समयमै ख्याल गरेन भनेर क्यान्सर फैलंदै गएर अकालमा ज्यान पनि जान सक्ने भएकाले यो डरलाग्दो रोग...
भारतमा विद्युत बेच्नुअघि कर्णालीका अँध्यारा वस्तीमा पुर्‍याइयोस् – ग्यानेन्द्र शाही (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौं / भ्र,ष्टाचा,रविरु,द्धका अभियान्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्य कारी निर्देशक कुल,,मान घिसिङसँग कर्णालीमा पूर्ण रुपमा विद्युतको पहुँच पुर्‍याउन अ,नुरोध गरेका छन् ।,, “बुधबार...
ठूलो संख्यामा जागिर खु’ल्यो ! कति माग गर्‍यो ?
पृथ्वीमा आउँदैछ नयाँ महासं’क’ट, नासाले तो’के’रै दियो यस्तो चे’ता’व’नी
Naya Post Nepal0
भनिन्छ मायाप्रेममा मान्छे अ’न्धो हुन्छ तर आजको यो घ'ट'ना' लाई नियाल्ने हो भने यो कुराको बिश्वास पनि हुन्छ । ६९ बर्षका बाजे र २२...
सुमित्रादेवि आमा जो उमेरको हिसाबमा अठत्तर बर्षकि हुनुभयो । एउटै घरमा छोराछोरिकै साथमा भएर पनि आमा एक्लि हुनुहुन्छ । आमालाई सुख के हो खुसि...
यी हुन् फुटबलर विमल घर्ती मगरको प्रेमिका
रोनाल्डोले टारे युनाइटेडको हार
नेपाल फर्कंदा खुशी छु : प्रशिक्षक अबदुल्लाह अलमुताइरी
प्रशिक्षक अलमुताइरी पुनः तीन वर्षको सम्झौता गरि नेपाल आउंदै
फेरि घट्याे सुनको मूल्य हेर्नुस् तोलाको कति ?
यस्तो छ आज सुनचाँदीको बजार भाउ, तोलाको कती ?
फेरि घट्यो सुनको भाउ, हेर्नुस् तोलाको कति ?
सुनको भाउ घट्यो, हेर्नुस् तोलाको कति ?
यी हुन टिकटकबाट क’रो’ड कमाउने नेपाली युवती
नेपाल आइडल-४’ मंसिर २३ गतेबाट प्रसारण हुने
गायिका रचना रिमाल १२ कक्षा उत्तीर्ण, कती जिपिए ल्याए ?
पेटमा छोरा छ कि छोरी जान्न चाहानुहुन्छ ? यस्ता देखिन्छन् ल’क्षण...
प्रेमका तीन रुपः कुनै पीडादायक, कुनै रोमाञ्चक, तपाईको कस्तो ?
श्रीमानले छोडेपछि ९ महिनाको बच्चा बोकि ठेलामा राखेर तरकारी बे’च्दै(भिडियो हेर्नुहोस्)
आफ्ना बाबुआमा हुँदाहुँदै पनि अनाथलयमा बस्न बा’ध्य भएका बरिष्टेको रु”वाउने कथा...
रमेश र नन्दको पुत्री लाभ , हार्दिइ बधाइ
८० वर्षीया महिला जसले दैनिक खान्छिन् आधा किलो बालुवा
धेरै से’क्स गरेर बिरामी भए प्रसि’द्ध अभिनेता
से’क्स’ले भा’इ’र’स म’र्छ भन्दै युवतीलाई से’क्स’को द’बा’ब दिएका डा’क्टर अ’र्ध’न’ग्न अवस्थामा...
एउटा बाख्रो २५ लाखमा बिक्यो, के छ यसको खास विशेषता ?
उदयपुर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवोदी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पुत्रशोकमा परेका उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाका मेयर बलदेव चौधरीलाई घरमै पुगेर समवेदना प्रकट गर्नुभएको...
सिन्धुली जिल्लाको एक संक्षिप्त परिचय
अन्तिम संस्कारका बेला आफ्ना पिताको लाशअगाडि छोरीको हट पोज
जन्मीएका ८ सन्तान खाल्टोमा गाढेर अहिले ओढारमा (हेर्नुस भिडियो)
यिनै हुन् देउरानी जेठानी मिलेर मारेका देवोर……(भिडियो)
छोरी हुनुको पि’डा : घर भन्दा गाउँकालाई छ, मेरो चि’न्ता
जिन्दगीले दिएको अनेक चो'टहरुसग लड्दा लड्दै २० बर्ष पार गर्न लागी सकेछु। समय कति सिक्नु पर्ने र सिक्नु नपर्ने कुरा सिकायो मैले कति सिके...
गजलको सबैभन्दा ठु’लो धनराशिको पुरस्कार सहित पुरस्कृत हुँदै : बाबु त्रिपाठी